ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် မြန်မာအစားအစာပွဲတော် (နယူးယောက်မြို့တော်) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများအတွက် အသည်းရောဂါ ဘီပိုး ပညာပေးမည်
၈၈ အရေးတော်ပုံရဲ့ အာဇာနည်ကျောင်းသူလေး ၀င်းမော်ဦး အသက် ၄၀ ပြည့်ပြီ
၀စ္စကွန်ဆင်ပြည်နယ်၊ မယ်ဝကီးမြို့က “နေရာတကာ” ကွန်မြူနီတီစာစောင် ထွက်ပြီ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် မြန်မာအစားအစာပွဲတော် (နယူးယောက်မြို့တော်)
BOGYOKE (GENERAL) AUNG SAN 100 YEARS CELEBRATION MUSIC PERFORMANCE
(မိုးမခကြော်ငြာ) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၅
ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည့် မွေးနေ့ အတွက် ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊
မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်သော ပန်းချီကားများ ပြသခြင်း၊
သီချင်းသီဆိုခြင်း၊ သရုပ်ဖော်၊ ပြဇာတ် တင်ဆက်ခြင်း၊
ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့ အမှတ်တရ စာတမ်း၊ သ၀ဏ်လွှာဖတ်ကြားခြင်း၊ တို့ ဖြင့် ကျင်းပပါမည်။
နေ့ ရက်။ ။ ၇ ရက်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၁၅ (စနေနေ့ )
အချိန်။ ။ နံနက် ၁၀း၀၀ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီ
နေရာ။ ။ P.S. 12 James B Colgate,
42-00 72nd Street, Woodside NY 11377.
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် မြန်မာအစားအစာပွဲတော် မှ ရန်ပုံငွေများကို ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း သို့ လှူဒါန်းသွားပါမည်။”